Date My Pet » Mampiaraka – Sabotaging ny Tenanao Ianao?
"Halako niaraka" dia fanehoan-kevitra reko avy ny vehivavy mpanjifa Matetika loatra. Io fihetsika ratsy mampiaraka dia iray amin'ireo antony lehibe indrindra fa ny vehivavy tokan-tena dia afaka mijanona 'Foana' ny tokan-tena nandritra ny fotoana ela. Ny ankamaroan'ny vehivavy aho, dia mahita amin'ny fomba fampiharana Coaching miaraka amin'ny saina diso tanteraka napetraka, izay midika fa ny fomba tena manatona miaraka sabotages ny vintana fihaonana ny fiainany mpiara-miasa.
Ary mbola io toetra io dia tanteraka takarina. Dia efa tonga any rehetra, 'Nanery' ny tenantsika mba ao amin'ny lalao, sonia niakatra ho any amin'ny toerana fiarahana aterineto, trawling amin'ny alalan'ny hafatra izay manao ny hoditra indraindray nandady, matetika loatra amin'ny olona manambady sy ny hafa undesirables, ary farany dia olona iray manome vintana satria toa mahafinaritra. Fanaovana fifandraisana, Niady hevitra nilaozana sy efa forwards, manomboka mihitsy aza angamba hahazo flicker ny fientanentanana - dia toa mahafinaritra, izy ny tena tsara tarehy eo amin'ny sary, ary misy fifandraisana mazava. Noho izany dia handamina ny fivoriana. Ianao natahotra, laninao maro ny fotoanany sy ny heriny miomana, ianao manontany tena ianao raha manao fahadisoana, fa manao ny ezaka, mitarika eo amin'ny palitaonao, mivoaka ho any amin'ny hatsiaka sy ny nandeha tany na aiza na aiza (matetika na dia ora vitsy) hihaona ny daty. Mahatsapa ho faly ianareo ankehitriny, izy rahateo mety ho 'ilay'.
Ary dia hahita azy! Latsaka ny fonao satria toy ny mijery sary TSY MISY, raha ny marina kokoa dia 'Shrek' noho ny 'Becks'. Izy roa santimetatra fohy noho izy nilaza fa, ary ireo sary mazava ho azy fa naka ireo taona maro lasa izay raha tsaraina amin'ny lanjany fanampiny sy miavaka tsy ny volo! Dia natahotra izy na izany aza ianao tapa-kevitra ny 'dia miezaka' mba hanome azy fahafahana, Aho hoe tonga ianao ny lalana rehetra eto! Misy ny magnetism betsaka araka izay mety mahatsapa amin'ny soggy laisoa ary manomboka mieritreritra avy hatrany ny afaka. Nefa ianao tsy te-ho tsy mahalala fomba ianao ka mipetraka amin'ny alalan'ny nanaintaina be vao ora hafahafa, resaka momba ny tsy mahalala fomba be, ary ny andro ianao ka izao vao mangidihidy ny handositra. Ny fifandraisana izay misy aterineto dia na aiza na aiza mba ho hita sy ianao samy mahatsiaro ho mahazo aina tsara. Rehefa miala ao ny orana ianao hoe ny antony dia nandany ny fotoana, vola sy ezaka ho avy amin'ny daty iray hafa, ary ianao an-trano lohan'ny fihetseham-po diso fanantenana, ary aza mafy kokoa efa latsa-paka ao amin'ny finoana fotsiny fa tsy misy lehilahy mendrika ho anao! Dia tsy mahagaga raha atao vehivavy leo.
Mampiaraka afaka hahasosotra ary mora ny mahazo demotivated. Izany dia afaka mahatsapa fandatsahana am-po sy mandrotika aza mba handeha amin'ny tady ny daty amin'ny olona izay tsy ahatsapanareo sombin amin'ny, ary manana ny fanantenana ny fihaonana ny mpiara-miasa indray, ary indray Nanjavona. Misy mety burnout rehefa manao be dia be ny hoe mampiaraka sy ny vehivavy sasany dia mety ho lasa tsy matoky tena, ary na dia jaded. Izany dia tsy hanasitrana an'ilay ankizy ny toe-javatra mihitsy, satria, saingy efa ao io fomba, iray dia afaka mora foana ny vehivavy malahelo azy Mr Right tanteraka rehefa tonga teny no.
Fantatrao ve fa ny ankamaroan'ny vehivavy dia tsy tena mihaja izany raha ny marina ny olona handeha izy ireo tatỳ aoriana, mba hanambady rehefa nitsena azy voalohany? Interesting! Fandinihana vao haingana tao amin'ny The Daily News milaza fa manodidina 22% ny mpivady hihaona amin'ny alalan'ny asa. Izany no tsy misy loza – dia noho ny fifanintonana dia avela hanorina ho azy, rehefa ela. Ary matetika izy no olona izay matetika mihitsy no homena fahafahana raha efa nitsena azy an-tserasera, zavatra mba hitondra ao an-tsaina toy ny ianao Rehefa nikaroka ny lalao.
Noho izany ny zavatra tokony hatao dia ny hanova izany fihetseham-po ratsy ny hampiaraka?
Raha ny marina tsara ny fiovan'ny fomba fijery tsotra dia izay rehetra ilaina mba hanova ny zavatra rehetra ny mampiaraka ho anao mba hahafahanao manomboka tena mankafy azy io, ary dia afaka miantso amin'ny olona haingana kokoa. Raha toa ka, mety manomboka ny fijerena ny fiarahana ho toy ny 'fahafinaretana fanao'Izy ireo ho be kokoa ny fahombiazana, ary izy ireo dia hahazo ny dingana maro kokoa. Ka inona marina no 'fahafinaretana fanao'Hoe?
SOSO-KEVITRA TOP ireo hilaza aminao ny fomba hahafahanao mampiasa ny 'fahafinaretana fanao ' fomba ny fahombiazana.
1. Mitete ny fandaharam-potoana.
Aza mihevitra ny azy ho toy ny mpiara-miasa mety ny fiainana, fa ho eo fotsiny izany fotoana izany, ary ho olona vaovao liana momba azy. Izany fotsiny ny daty – tsy misy teny fikasana ny fifandraisana, na ny fanambadiana - izany fotsiny kafe, na ny tongotra, na manao na inona na inona miara-. Ny soa eto dia roa sosona, Voalohany indrindra dia haka ny tsindry rehetra eny mba afaka samy miala sasatra, dia mihevitra fa. Tsara ny ankamaroan'ny olona dia natahotra amin'ny daty voalohany, ary tsy hiseho amin'ny ny tsara indrindra, na izany aza dia hanampy izany nataony miadana. Faharoa azonao hampihatra ny fiarahany tamin 'ny olona izay tia anao, izay midika fa ny tena misy vidiny miakatra, ary rehefa 'ny olona' no mampiseho ny anao efa vonona ho azy, satria efa tonga 'voajanahary'.
2. Tandremo ny daty voalohany tena fohy.
Aza manaiky ho sakafo hariva daty daty vitsivitsy voalohany satria ela loatra hiarahana amin'ny olona iray tsy fantatrao. Adiny iray isaky ny zavatra be dia be ho laniana amin 'ny fivoriana roa voalohany. Fohy ary impactful no handeha isika ho eto. Izany dia manampy amin'ny fisorohana burnout koa ianao raha mbola miaraka ny olona maro avy hatrany am-piandohana.
3. Aza hiresaka an-tserasera amin'ny olona izay mipetraka be lavitra anao.
Izany mamonjy be dia be ny hery sy ny ratram-po. Manana ny fitsipika ho daty fotsiny ny olona izay eo an-toerana ho anao (ao anatin'ny adiny iray ny Travel lavitra tampon). Ny ankamaroan'ny toerana an-tserasera manana endri-javatra izay afaka manadio ny valin'ny fikarohana ho tafiditra ihany ao anatin'ny olona iray lavitra. Tadidio tsy tena mahafantatra olona iray mandra-hitsena azy ireo amin'ny olona, ka ahitana ny fifandraisana an-tserasera fa tsy misy marina dia rehefa mihaona mifanatrika. Izaho koa ary mandala ny olona izay efa handeha ho any amin'ny vehivavy ny daty.
4. Miala sasatra sy mankafy ny daty. Maka fahafinaretana!
Mitandrema ianareo, fandrao – Tsy midika izany fanampiana iray kamiao hisotro toaka! Na dia atao hoe nahoana ny olona toy ny zava-pisotro amin'ny daty voalohany fa tsara kokoa raha tsy tanteraka na hifikitra amin'ny iray amin'ny daty voalohany mba tena afaka hanalavitra nankany ka hahita ny zavatra tsapanao momba io daty, tsy misy toaka manome zavatra ho rosy Tint. Fa tsy jereo raha afaka mahita zavatra mahaliana avy momba azy, ny olona rehetra manana alahelo!
5. Omeo fotoana.
Midika izany fa mbola velona maharitra daty faharoa ary raha angatahany iray, raha toa ianao soa aman-tsara aminy. Manome azy fahafahana izany na dia tsy mahatsapa tia azy. Eny TENA! Ity no ampahany manan-danja ao amin'ny dingana, indrindra ho an'ny vehivavy izay manana naman-dratsy izay fomba sy ny olona maka izay tsy tsara ho azy ireo.
6. Aoka izy hitarika
Ity no ampahany rehetra amin'ny ankapobeny ny fomba fijery ny vehivavy izay mitady fifandraisana sambatra. Ka izy dia midika ho ny olona mba mangataka daty faharoa, raha toa ka misy ny ho iray. Izaho koa manohana fa mandoa satria manampy nanangana ny fifandraisana mavitrika tsara, na dia mahatsapa izany no mampiady hevitra ny olona sasany. Vehivavy te-ho romanticized marina?
7. Manao momba ny fahamarinan-toetra feno dia mahatsiaro anao.
Rehefa ianao no eo amin'ny daty miaraka ireo lehilahy ireo manao ny marina ianao, ary ianao hoe ny fihetseham-ponao, na dia izany no hafahafa ny manao izany amin'ny voalohany. Koa raha leo ianao / sahiran-tsaina / nivadika eny / liana / faly azonao hanehoana izany. Tsy amin'ny fomba bitchy, tsy nisy tafo sy ny fomba marina. Izany terrifies vehivavy sasany, ary ho gaga ny olona indrindra dia handray izany eo amin'ny stride sy mankasitraka ny manao ny marina. Plus izany manokatra ny lalana ho tena, fifandraisana marina, ary manome azy akony izay fahafahana volamena ho azy mba hanitsy sy mandraisa andraikitra ny lalao ho anareo (raha mihevitra fa sarobidy izany – izay ianao).
8. Ny hahalala fomba, liana ary mahalala fomba.
Mety tsy hieritreritra izany no mety tsara ny olona fa efa naneho ny ho anareo, ary dia mitondra anao any amin'ny daty, ary mendrika ny fankasitrahana.
Mampiaraka izany dia tsy hanampy anao ho tia azy kokoa, fa kosa hanampy anao mba hanangana ny 'fifandraisana hozatra' satria hahazo ny mampihatra hoe tena (mahery, Anarana vehivavy) manodidina tena lehilahy. Ary raha manao izany ny olona rehetra dia mampiseho ny kely indrindra rehefa manantena an 'izany!
Manaraka ireo toro-hevitra ambony noho ny hoe mampiaraka sy ny fomba ny mampiaraka zavatra manova tanteraka.